Akita: Eyga Raadinta weyn ee ka yimid Japan - Taranka
Akita: Eyga Raadinta weyn ee ka yimid Japan
Akita waa eey aad u weyn oo ka soo jeeda Japan. Eeyahaani waa muruqyo waxayna raadraaci karaan taariikhdooda illaa iyo jabaan hore. Waxay mar uun la sharfay inay yihiin calaamado caafimaad iyo farxad wanaagsan.
Kuwani waa eeyo waardiye ah, oo loo soo maro. In kasta oo loo adeegsado inta badan saaxiibka maanta, eeyahaas ilaalada ah wali waxay xambaaraan waxyaalo badan oo dareenkooda ah waqtiyada casriga ah. Tani waxay ka dhigi kartaa iyaga xayawaan murugsan.
Halkee ayuu ka yimid Akita?
Sidee u eg yahay Akita?
Japanese Akita iyo American Akita
Intee ayey la egtahay Akitas?
Midabkee Akitas soo gali karaa?
Daacadnimada iyo Karaamada Akita
Arimaha Caafimaadka Eyga ee Akita
Waa imisa eyga Akita?
Akita iyo Shiba Inu
Yey tahay inuu helo eeyga Akita?
Akita waa Ey Jabaan u dhashay. Waxay ka timid japankii hore waana eey u eg Spitz. Noocani wuxuu u eg yahay inuu dib ugu soo laabanayo taariikhda.
Si kastaba ha noqotee, taranka sida aan ognahay maanta waxaa la soo saaray bilowgii qarnigii 17aad waqooyiga Japan. Waxaa jira khuraafaad badan oo ku saabsan sida eey ku yimid.
Mid ka mid ah khuraafaadka noocan oo kale ah ayaa ku lug leh nin sharaf leh oo masaafuris ah oo sidoo kale ku dhacay jacaylka eeyaha. Waxaa loo diray inuu ku noolaado inta ka hadhay maalmihiisa jasiirad.
Wuxuu ku dhiirrigeliyey dadka kale ee gobolka Akita inay soosaaraan eey ugaarsi badan oo ciyaarta weyn ah. Ugu dambeyntii, tani waxay abuurtay Akita, oo loo yaqaan ugaarsiga ugaarsiga duurjoogta, deerada, iyo xitaa orso.
Muddo dheer, lahaanshaha Akita wuxuu ku koobnaa qoysaska boqortooyada. Si kastaba ha noqotee, waqtiyadii ugu dambeeyay, dadka maalin kasta waxay bilaabeen inay u shaqaaleeyaan sida ugaadhsiga iyo eeyo wehel ah.
Waqtiyada kala duwan ee taariikhda, eeygan wuxuu ku jeexjeexay qarka u dhammaaday. Tani badanaa waa sababta oo ah waxay ku koobnayd dadka sharafta leh taariikhdeeda in badan. Si looga hortago in cunuggu u dhinto, naadiga qaran ee Japan ayaa la aasaasay 1927.
Helen Keller ayaa markii dambe keentay Akita kii ugu horreeyay Mareykanka. Waxaa loo qaaday inay aragto taallada Hachiko intii ay ku guda jirtay safarkii ay ku tagtay Japan.
Akitahan caanka ah Akita wuxuu caan ku ahaa sugitaanka sanadaha milkiilahiisa rugta tareenka. Booqashada taalada ka dib, waxay hibo u siisay laba Akitas dawladda Japan.
Dagaalkii Labaad ee Adduunka kadib, askar badan ayaa Akitas ku soo celiyey gobollada. Si kastaba ha noqotee, Akita ma uusan galin Buugga 'AKC Stud Book' illaa 1972.
Akita waa a weyn iyo eey awood badan. Waxay leedahay burly, jir lafo culus oo waa eey u eg nooca candhuufta.
Madaxoodu waa mid aad u weyn oo weyn, taas oo ka dhigaysa iyaga kuwo si caddaalad ah wax u dhigaya. Eygan weyn sidoo kale wuxuu leeyahay dabo weyn, oo duuban.
Cunnada kacsan ayaa madaxooda ka dhigeysa mid ka weyn sida ay dhab ahaan tahay! Indhahooda dhalaalaya ayaa ka mid ah astaamaha lagu garto noocyada taranka. Indhahoodu waa feejigan yihiin oo wax muujiyaan.
Maxaa loola jeedaa marka dabada Akita ay hoos u dhacdo?
Dabada Akita iyo hoos u foorara sababo kala duwan awgood. Haddii eeygu niyad jabsan yahay, hurdo badan yahay, ama xanuun dareemayo, dabada ayaa ku dhici karta natiijada.
Tani waxay caadi ahaan dhacdaa marka eydu ay yihiin ilko baxayo maadaama xanuunka afkooda uu sababi karo inay dabadooda hoos u dhacdo sabab la’aan.
Dabadoodu sidoo kale way soo dhici kartaa markay jiraan nasasho ama aan aad u firfircooneyn xilligan. Tani waxay caan ku tahay dhamaan eeyaha oo dhan oo dabadooda kor loo qaado.
Sida eyda leh dabo toosan marwalba dabadooda toos uma taagnaadaan, eeyaha leh dabo laaban laabma waligood dabadood kor uma qaadi doonaan.
Si kastaba ha noqotee, Akitas sidoo kale waxay heli karaan wax loo yaqaan a dabada la qaboojiyey . Tani waxay dhacdaa markay asal ahaan 'murgacdaan' salka dabadooda.
Badanaa, markay taasi dhacdo, eeygu kor uma qaadi doono toddobaad ama laba toddobaad sababtoo ah wuu xanuunaa. Inta badan, eygu kaligiis ayuu ku fiicnaan doonaa. Mararka qaarkood, hase yeeshe, waxay u baahan kartaa in lagu daaweeyo daawo.
Waxaa jira laba nooc oo waaweyn oo Akitas ah - Jabaaniiska Akitas iyo Akitas Mareykan ah . Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya labadan nooc waa cabbirka. Akitas-ka Mareykanka ayaa xoogaa ka weyn Akitas-ka Japan.
Japan Akitas sidoo kale waxay leeyihiin dhago yaryar. Akitas Mareykan ah waxay leeyihiin dhago aad u ballaaran.
Badanaa, Akitas wuxuu istaagi karaa meel kasta oo laga bilaabo 24 illaa 28 inji, qiyaastii 61 cm ilaa 71 cm. Waxay kaloo culeyskoodu noqon karaan 70 illaa 130 rodol ama qiyaastii 31.7 kg ilaa 59 kg.
Ragga badanaa wey ka balaaran yihiin dumarka. Runtii ma heli doontid dheddig ka weyn 100 rodol ama 45 kg. Si kastaba ha noqotee, ragga waxay heli karaan ugu badnaan 130 rodol ama 59 kg.
Akitas waxay ku imaan kartaa dhowr midab oo kala duwan, oo ay ku jiraan caddaan. Fawn cas waa mid ka mid ah midabada jaakadaha ugu caansan.
Si kastaba ha noqotee, sisinta, madow, shukulaatada, iyo brindle dhammaantood waa suurtagal sidoo kale. Calaamadaha cad ayaa aad u badan.
Calaamado kale ayaa sidoo kale caan ah. Maaskaro cad, jiinjiin, iyo madow ayaa suuragal ah.
Akita wuxuu leeyahay laba-jaakad, taas oo ka dhigaysa mid quruxsan u adkaysta cimilada (iyo qalafsan).
Akitas waxaa loo soo saaray inay noqdaan wax badan ugaarsi eeyaha. Qaar badan oo ka mid ah dareenkoodii hore iyo dabeecaddoodii shakhsiyadeed ayaa wali muujinaya illaa maanta.
Akitas ma yihiin eeyo qoys oo wanaagsan?
Gaar ahaan maahan. Waxay yihiin xubno daacad ah oo kalgacal badan qoysaska. Waxay jecel yihiin la joogida qoysaskooda xoogaa weyna ilaalin karaan.
Si kastaba ha noqotee, iyagu si gaar ah uma jecla shisheeyaha. Baaxaddooda weyn waxay ka dhigi kartaa iyaga kuwo adag in la xakameeyo sidoo kale.
Waxay laabi doonaan xubnaha qoyska, laakiin maahan aad iyo aad kalgacasho Iyagu maahan dad jilicsan.
Akitas way kufiicnaan karaan carruurta, laakiin waxay kufiicanyihiin carruurta waaweyn. Si gaar ah ugama dulqaadan carruurta yaryar.
Akitas ma la noolaan karaan eeyo kale?
Maya. Iyaga ayaa caan ku ah inay yihiin dagaal badan xagga eeyaha kale, gaar ahaan kuwa ay isku jinsiga yihiin. Bulsho joogto ah uma muuqato mid tan caawinaysa. Eygan runti wuxuu ka tirsan yahay guri-xayawaan ah.
Akitas miyuu ku dhacaa walaac kala tag?
Akitas si gaar ah uguma nuglaan walaaca kala-goynta. Si kastaba ha noqotee, nooc kasta wuxuu heli karaa walaac kala soocid, sidaas darteed waa suurtagal.
Walaaca kala-goysku wuxuu sababi karaa dhibaatooyin xagga dabeecadda ah oo kala duwan. Maaddaama eydaasi aad u ballaaran yihiin, waxyeello badan ayey geysan karaan.
Si kastaba ha noqotee, eeyahaani badanaa ha sameyn qabo walaac kala tag.
Maxay Akitas u yihiin kuwo dagaal badan?
Akitas taariikh ahaan looma abuurin inay ku dhowaadaan eeyo kale oo badan. Iyagu ma ahan kuwo u janjeedha dhanka dhulka waxayna noqon karaan dhul.
Tani waa sababta ugu weyn ee ay u dagaallamaan. Waxay ku fiican yihiin qoysaska hal-eyga ah ama xitaa qoysaska gebi ahaanba ka xor ah xayawaannada kale.
In kasta oo ay jiraan warar xan ah, haweenka Akitas sidoo kale waa kuwo dagaal badan.
Labada jinsiba waxay sameyn karaan ilaalin wanaagsan astaamahan awgood.
Akitas wax badan ma ciyey?
Iyagu gaar ahaan ma ahan kuwa buuq badan, laakiin way ciyo. Eeyo dhuleed ahaan, waxay u ciyi doonaan booqdayaasha, dadka bannaanka u socda, iyo eeyaha qalaad. Waxay samayn karaan waardiye wanaagsan oo eeyaha digtoon tan darteed.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad raadineyso eey aamusan, tani maahan.
Ma tabobari kartaa Akita?
Sida eeyaha oo dhan, Akitas waa tababaran . Iyagu waa kuwo xariif ah oo daacad ah, kuwaas oo ka shaqeeya anaga markii aan isku dayeyno inaan tababarno.
Si kastaba ha noqotee, waxay sidoo kale noqon karaan xoogaa madax adag oo madaxbannaan. Tani waxay u egtahay inay ugu badan tahay marxaladooda 'dhalinyaro'.
Hore iyo badiyaa tababarku waa lama huraan. Haddii kale, eeyahaani waxay si fudud u noqon karaan kuwo aan xakamayn karin. Waa inay si ballaadhan ugu dhexeeyaan sidii eyda da'da yar.
Fasallada eyda ayaa lagama maarmaan u ah bakhaarradan. Waxay u baahan yihiin inay bartaan inay aqbalaan dad badan oo shisheeyayaal ah. Astaantooda ayaa ah in shisheeyaha oo dhami ay yihiin hanjabaado; isdhexgalka hore ee bulshada wuxuu u baahan yahay inuu saxo fikirkaan.
Eeyadan ayaa kala ah aad nadiif ah. Tani waxay ka dhigeysaa iyaga kuwo aad u fudud oo lagu tababarto dheriga. Xaqiiqdii, eeyaha qaarkood waxay u muuqdaan inay dheriga naftooda ku tababaraan dadaal yar oo naga yimaada!
Akitas si gaar ah uma adka in la daryeelo. Xaqiiqdii, shuruudaha daryeelkoodu waa yar yahay. Si gaar ah uguma nugul cimilada iyo cimilada, iyaga oo ka dhigaya xulasho wanaagsan gobollada intooda badan.
Immisa jimicsi ayuu Akita u baahan yahay?
Akita wuxuu ubaahan yahay xoogaa jimicsi ah heerka tamartiisa sare. Iyagu ma aha nooc aad u firfircoon.
Si kastaba ha noqotee, waxay u baahan yihiin qadar jimicsi dhexdhexaad ah maalin kasta. Socodka degdega ah waa ikhtiyaar wanaagsan, in kasta oo noocaan Jabaan u baahan yahay waxoogaa ka badan tan.
Jimicsi maalinle ah, eeyahaani waxay kufiicnaan karaan guri yar. Iyagu aad bay u dejiyaan gudaha oo si wanaagsan ayaa loo dhaqmaa. Kaliya waa markay jimicsi yar yeeshaan waxay noqon karaan kuwo wax dumiya.
Xitaa wakhti yar oo lagu ciyaaro banaanka hore ee ardaaga waxay noqon kartaa ikhtiyaar ku habboon bakhaaradaas.
Akita oo Aad u Nadiifsan
Eeyadan ayaa caan ku ah nadaafadda sida bisadaha oo kale. Iyagu aad ayey nadiif u yihiin oo uma baahna inaad wax badan hagaajisid tan darteed.
Waxay leeyihiin ur yar oo ey ah umana baahna qubeys badanaa had iyo jeer. Dharkooda qoto dheer waxay u baahan yihiin cadayasho maalin kasta.
Noocyada Akita waxay daadiyaan xilliyada. Inta lagu jiro waqtiyadan, waxay u baahan doonaan in badan la cadaydo. Marka aysan daadinayn, waxaad awoodi kartaa inaad kaga baxdid cadayashadaada kaliya hal mar usbuucii.
Runtii waxay kuxirantahay shaqsiga iyo waqtiga sanadka. Waxaad u baahan tahay inaad isha ku hayso heerkooda daadinta si aad u go'aamiso goorta ay tahay inaad cadayato.
Koodhadhkoodu waa meesha ay inta badan timahoodu daatay ka yimaadaan, markaa waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho burushka saxda ah si aad ugu gaadho qoto dheer jaakaddooda. Dharkooda kore ayaa sidoo kale daadin kara, laakiin badiyaa ma ahan wax xun.
Sida eeyaha oo dhan, waxaad u baahan doontaa inaad cadaydo oo aad ciddiyaha si joogto ah u jajabiso. Tani aad ayey muhiim ugu tahay caafimaadkooda. Ciddiyaha soo kordhay waxay noqon karaan kuwo xanuun badan, ilkaha cudurka qaba waxay sababi karaan dhibaatooyin nafta halis geliya.
Immisa ayuu cunaa Akita?
Akitas way cuni karaan wax badan. Waxay kala yihiin weyn eeyaha, sidaa darteedna waxay u baahan yihiin cunto badan oo dheeri ah si ay u noolaadaan. Qofka weyn ee caadiga ah Akita wuxuu cunaa qiyaastii 5-6 koob oo cunto ah maalintii.
Si kastaba ha noqotee, cuntooyinka kala duwan waxay leeyihiin qaddar kalooriya oo kala duwan. Sidaad u maleyn karto, tani waxay saameyn ku yeelan kartaa xaddiga aad u baahan tahay inaad ku quudiso canine-gaaga. Hubi dhabarka bacda cunnada eeyahaaga ama canuggaaga tilmaamo gaar ah.
Eeyahaani waxay u baahan yihiin cunno borootiin sare leh muruqooda awgood. Waxay u baahan yihiin borotiin fara badan si ay jimicsigooda u sii dhisnaadaan.
Inta badan cuntooyinka eyda oo tayo sare leh waxaa ku jira hilib fara badan, taas oo macnaheedu yahay inay badanaa aad ugu badan yihiin borotiin. Tani waxoogaa ayay ku kici doontaa, laakiin waxay muhiim u tahay caafimaadkooda guud.
Sida noocyada badankood, eeyahaani waxay u nugul yihiin dhowr dhibaatooyin caafimaad oo kala duwan. Marka hore, waxay yeelan karaan dhibaatooyin xagga indhaha ah, sida soo noqoshada aragga ee soo noqnoqda ama PRA.
Cudurkani asal ahaan wuxuu ku lug leeyahay luminta unugyada isha eeygaaga, oo kaa caawinaya inaad canine aragto. Iyaga oo aan si sax ah u shaqeyn, eeygu aakhirka wuu indho tirayaa. Tani waa xaalad hidde ah.
Dhibaatooyinka dhagaha ayaa sidoo kale macquul ah, in kastoo aysan u badnayn sida kanaalada kale. Ilaa iyo inta aad isha ku hayso dhegaha eygaaga oo aad nadiifiso markay wasakh noqdaan, fursadda caabuqa dhegaha waa in la yareeyaa.
Sababtoo ah eeyahaani waa weyn yihiin, dhibaatooyinka wadajirka ah waa wax caadi ah. Tani run bay u tahay ku dhowaad dhammaan eeyaha, in kasta oo ay iyaduna waxyaabo badan ku xiran tahay hiddo-wadaha . Hip dysplasia waa wax caadi ah.
Nasiib wanaag, waxaa jira waxyaabo yar oo aad sameyn karto si aad uga fogaato kuwan dhibaatooyinka wadajirka ah . Marka hore, jimicsi xoog leh inta eeygu soo korayo wuxuu sababi karaa dhibaatooyin wadajir ah goor dambe.
Eeyaha aan koritaanka dhamayn waa inaan si xoog leh loo jimicsiin, waana inaysan waligood noqon qasbay jimicsi. Haddii eeydu u baahan tahay inay jiifsato oo ay nasato inta lagu jiro socodka, waa inaad u oggolaataa inay nastaan.
Sidoo kale waa inaad hubisaa inaad quudiso eeyaha ku habboon eeyaha. Dhammaan cuntooyinka eeygu kuma habboon yihiin eeyahaas.
Waxaad ubaahantahay cunto loo sameeyay eeyo yaryar oo waaweyn. Kuwani waxay ka kooban yihiin nafaqooyinka eeyo yar yar oo koraya u baahan yihiin si ay u taageeraan laabatooyinkooda.
Akita sidoo kale xoogaa bay u nugul tahay buunbuunin . Qofna ma garanayo waxa sababa cudurkan.
Si kastaba ha noqotee, waa mid naf-gooya oo u muuqda inta badan caan ku ah eyda qaarkood sababo aan la garanayn. Asal ahaan waxay ku lug leedahay caloosha oo buuxinaysa gaas.
Ugu dambeyntiina, caloosha ayaa riixi doonta xididdada, iyadoo jareysa wareegga xubnaha iyo muruqyada qaarkood. Tani waxay noqon kartaa mid dilaa ah si dhakhso leh waxayna u baahan tahay qalliin degdeg ah.
Hypothyroidism-ka xoogaa caan ah sidoo kale. Cillad aan caadi ahayn oo ku jirta qanjirka 'thyroid' ayaa lagu gartaa cilladan. Tani waxay keenaysaa hoos u dhac ku yimaadda awoodda dheef-shiid kiimikaadka eeyga, kaas oo khalkhal gelin kara dhammaan noocyada waxyaabo.
Calaamadaha cilladan waxaa ka mid ah miisaanka oo kordha, caajis, dulqaad la'aan, timo caajis ah, jaakad khafiif ah, iyo midabka maqaarka oo sii kordha.
Cudurkan ayaa ah maya waa la daaweyn karaa, laakiin waa lagu maamuli karaa daawooyinka. Eygaagu wuxuu u baahan doonaa inuu qaato hormoonka tayroodhka beddelidda ee afka.
Waa maxay baaritaanada caafimaad ee ay tahay in Akita la sameeyo?
Kahor intaan la abuurin, waalidiinta Akita ee awooda waa inay maraan baaritaano caafimaad oo kaladuwan. Tani waa in la hubiyo in aysan u gudbin carruurtooda wax carqalad ah.
Indhahooda waa in la hubiyaa, laabatooyinkoodana waa in raajo la saaraa si loo hubiyo inaysan u nuglayn rajada dysplasia.
Waa inaad wax ka weydiisaa baaritaankaan caafimaad kahor intaadan iibsan wax eey ah. Sidoo kale, weydii caafimaadka waalidka.
Hadday suurtagal tahayba, weydii inaad aragto waalidiinta iyo aagga eyda lagu hayo ugu yaraan.
Intee ayuu nool yahay Akitas?
Intee ay le'eg yihiin, Akitas waxay leeyihiin nolol aad u weyn. Badanaa, celceliska Akita wuxuu noolyahay inta udhaxeysa 10-15 sano. Genetics, deegaanka, iyo caafimaadka ayaa door ka ciyaaraya meesha Akita-gaagu ku dhici doono.
Haddii eey si xun u saameeyaan dhibaatooyin caafimaad oo kala duwan, rajadiisa nololeed waxay u badan tahay inay ka hooseyso eyga caafimaadka qaba, ee ciyaaraha fudud.
Cayilku wuxuu sababi karaa dhibaatooyin badan oo Akita ah inay sii xumaadaan. Tusaale ahaan, culeyska dheeriga ah wuxuu culeys saari karaa kala-goysyada, taas oo sababi karta dhibaatooyin wadajirka ah.
Sababtaas awgeed, waa inaad ilaalisaa miisaanka eygaaga haddii aad ka fileysid inay caafimaad qabaan oo xoog yeeshaan noloshooda oo dhan.
Sida laga soo xigtay Xarunta Drake ee Daryeelka Caafimaadka Xoolaha, kansarku sidoo kale waa a sababaha guud dhimashada eeyahaas.
Akitas badanaa waxay ku kacdaa qiyaastii $ 800 . Kalkaaliyaha gaarka ah waxaad kaheleysaa eeyga arrimaha, sidoo kale khadka dhiigga. Eeyaha loo soocay si ay u muujiyaan ayaa ka qaalisan kuwa loo dhaqmo sida wehel ahaan.
Qaar badan oo ka mid ah soosaarayaasha sumcadda leh ayaa lacag badan ka qaadi doona eeyaha loo arko inay yihiin 'kuwa la kici karo' waxayna si dhow ugu habboon yihiin heerka naaska.
Si kale haddii loo dhigo, haddii eeygu si fiican ula jaanqaadayo tilmaamaha noocyadiisa oo uu ka gudbo tijaabooyinka baaritaanka caafimaadka, eeyga waxaa loo arkaa inuu ka qiimo badan yahay maxaa yeelay waxay u badan tahay inay soo saari doonaan eyyo tayo leh.
Haddii aadan qorsheyneynin tarankaaga Akita, markaa waxaad u badbaadin kartaa qashinkaaga adoo hagaajinaya ka hor intaadan guriga geyn.
Qiimaha nolosha ee Akita wuxuu noqon karaa mid aad u sareeya. Tusaale ahaan, eeygan shaqeynaya aad ayuu uga ballaaran yahay, sidaa darteed wax kasta oo aad iibsato sidoo kale waa inay weynaadaan.
Waxay u baahan doonaan santuuq weyn iyo sariir, lafo adag, iyo qaddarro badan oo daawo ah markii loo baahdo.
Waxay kaloo cunaan inbadan waxayna ubaahanyihiin cunto tayo sare leh. Sababtaas awgeed, waa inaad ka filataa inaad bixiso xoogaa yar oo cunto ah sannad kasta.
Maxaa loogu mamnuucay Akita magaalooyin gaar ah?
Magaalooyinka qaar waxay u tixgeliyaan eeyahaas kuwo khatar ah oo uma oggolaanaya magaaladooda gudaheeda tan darteed. Qaarkood waxay oggolaadaan ka-reebis, sida haddii kaneecadaadu ka gudubto baaritaannada qaarkood. Waa inaad ka hubisaa tilmaamahaaga magaalada ee hadda jira.
Waxaa jira ururo badan oo kaladuwan iyo daaqayayaal diiradda saaraya Akita. The Naadiga Akita ee Mareykanka waa naadiga 1-aad ee Mareykanka. Waxay xiriir la leeyihiin Naadiga Kennelka Mareykanka waxayna hayaan macluumaad badan oo ku saabsan Akita boggooda.
Waxa kale oo aad ka heli kartaa liiska naadiyada gobolka oo ay adeegsadaan Akitahooda raadin eey si aad u hesho eeyo yaryar oo hadda la heli karo.
The Naadiga Japan Akita ee Mareykanka wuxuu diiradda saarayaa Japan Akitas. Waxay kaloo leeyihiin a liistada si aad uga gudubto taas oo ah xubnaha ururka. Tani waa hab fudud oo lagu hubiyo inaad helayso eey tayo leh.
Mareykanka wuxuu hoy u yahay Badbaadinta Akita kala duwan. Hase yeeshe, kuwani badankood waa kuwo goboleed, hase yeeshe.
Khamaarkaaga ugu fiican ayaa ah inaad hesho mid daboolaya gobolkaaga, maadaama eeyaha ay soo badbaadiyeen ku jiri doonaan aaggaaga. Tan macnaheedu waxa weeye waxaad u baahan tahay oo keliya inaad u safarto masaafo yar si aad u korsato.
Badbaadinta qaar ayaa u oggolaan karta eeyahooda in loo qaado meelo kale. Si kastaba ha noqotee, tani badanaa waxay ka dhigan tahay inaad bixin doonto kharashka gaadiidka ama wadista si aad u soo qaadato eeyga naftaada.
Qaar ka mid ah ururada ugu caansan waxaa ka mid ah:
Samatabixinta Big East Akita
Bulshada Badbaadinta Akita
Samatabbixinta Rakki-Inu Akita .
Jabbaan Shiba Inu oo kaynta ku jira
Akita iyo Shiba Inu waa ey aad u qurux badan. Labaduba waxay kasoo jeedaan Japan waxayna yihiin eeyo u eg nooca candhuufta, taas oo ka dhigaysa inay isku egyihiin. Si kastaba ha noqotee, waxay ku kala duwan yihiin dhowr siyaabood oo kala duwan.
Farqiga ugu caansan ayaa ah in Shiba Inu uu aad uga yaryahay Akita. Shiba Inus kaliya wuxuu istaagayaa qiyaastii 13 ilaa 17 garabka, halka Akitas uu taagan yahay 24 inji. Tani waa farqiga ugu weyn ee u dhexeeya labada taranka.
Shiba Inus sidoo kale waxay leedahay rajo nololeed ka sareysa Akita. Waxay noolaan karaan ilaa 16 sano kiisaska badankood.
Waxaa jira xoogaa yar oo isku dhafan Akita oo socda maalmahan. Farsamo ahaan, Akita waa lagu cabi karaa eey kasta.
Si kastaba ha noqotee, noocyada qaar ee isku dhafan ayaa ka badan kuwa kale. Huskita, Akita Shepherd, iyo Akita Chow ayaa ah kuwa ugu badan ee halkaas ka jira.
Qaar ka mid ah noocyadan isku dhafan ayaa noqdey 'eyga naqshadeeye'. Si kale haddii loo dhigo, noocyadan isku dhafan ayaa loogu talagalay ujeeddo si ay u buuxiyaan shuruudaha qaarkood.
Tani daruuri maahan dhacdo cusub tan iyo markii eyda oo dhan ay ahaayeen mar noocyo isku dhafan. Si kastaba ha noqotee, waxay noqon kartaa xoogaa muran.
Weli, way adag tahay in la helo abuure ku xeel dheer eeyahaas si gaar ah. Sababtaas awgeed, badanaa way ka adag yihiin helitaankooda marka loo eego Akita saafi ah.
Akitas ayaa ugu fiican qoysaska xayawaanka-xayawaanka ah ee haysta carruurta waaweyn. Eeyahaani waa kuwo firfircoon oo u baahan xoogaa jimicsi ah maalin kasta. Sababtaas awgeed, waxay ku habboon yihiin kuwa ugu yaraan xoogaa firfircoon.
Waa inaad qorsheysataa inaad eeygaaga dibedda ugula ciyaartid ama aad socod ku qaadatid maalin kasta ugu yaraan 30 daqiiqo. Eeyadu waxay u baahan doonaan xitaa jimicsi dheeri ah.
Eeyadan sidoo kale way adkaan karaan in la tababaro. Waxay ugu fiican yihiin milkiilayaasha eyda khibrada leh ee u heellan kara fasalo tababar eey iyo is dhexgal joogto ah. Iyagu maahan eeyo fudud sinnaba.
Si kastaba ha noqotee, eeyahaani waxay noqon karaan kuwo lagu qurxiyo daryeelka saxda ah iyo mid ka mid ah saaxiibbada ugu daacadsan ee aad heli doonto. Waxay aad u jecel yihiin xubnaha qoyskooda waxayna xitaa noqon karaan eeyo waardiye ah oo wanaagsan haddii loo baahdo.
Akita wuxuu noqon karaa eey qoys oo wanaagsan xaaladaha qaarkood. Hase yeeshe, waxay u baahan yihiin daryeel iyo maarayn gaar ah.
Bernese Mountain (Macluumaadka Taranka Eeyaha & Tilmaamaha Milkiilaha)
Macluumaadka Taranka Eeyaha ee Peekapoo iyo Tilmaam dhameystiran
Alaskan husky magacyada iyo macnaha
sanka gaduudan oo dhiig leh
intee in le'eg ayay helayaan isku dhafka collie labiska
shih tzu iyo yorkie isku darka eeyaha